10 Streets tsara indrindra In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Streets tsara indrindra In Eoropa
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 10/01/2020)
Eoropa Feno sasany tsara tarehy indrindra Streets. Avy indrindra kanto sy maro loko ny mahazatra. Ny sasany tsara tarehy indrindra Streets Ao Eoropa dia efa hita sy tsara orina eo amin'ny fizahan-tany, fa olon-kafa no lalana tena izy harena miafina fa ireo ihany no ao amin'ny fantatrareo dia ho afaka ny Scout avy. Efa niara-nanao ny lisitra ambony!
1. Beautiful Indrindra Street In Eoropa: Cremieux eny an-dalana, Paris, Frantsa
Misy zavatra momba ny trano miloko isan-karazany sy ny quaint, cobbled arabe ny Cremieux eny an-dalana izay mahatonga mametraka ny fakan-tsary teo azo atao! Zavatra tsy tsara tarehy no nilahatra an-dalambe Paris izay ahitana fitambaran amin'ny pinks, anana, mavo sy ny BLUES, misy loko mifanaraka misy akanjo fa tsy maintsy atao sary tsimoka. Ataovy izany ho an gram, ry zalahy!
Via Toledo dia arabe tranainy ary iray amin'ireo manan-danja fiantsenana thoroughfare tao an-tanànan'i Naples, Italia. izany 1.2 kilaometatra avy eny an-dalana dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra Streets In Eoropa. Izany dia manomboka amin'ny Piazza Dante ary mifarana amin'ny Piazza Trieste y Trento, akaikin'ny Piazza del Plebiscito.
Fanorenana ny eny an-dalana dia baiko iray governoran'i an'i Naples, Pedro Alvarez de Toledo, in 1536. Via Toledo Lasa malaza toy ny vokatry ny Grand Tour nandehanany teo amin'ny faha-18 sy faha-19 taonjato ary fisaorana ho Neapolitan hira, izay tsy voalaza matetika.
3. Beautiful Indrindra Street In Eoropa: Kynance Mews, London, England
Ivy nanarona trano sy ny miafina tohatra. Kynance Mews in Kensington dia ny tsara tarehy indrindra lavitra Streets In Eoropa. In autumn, glows eny an-dalana miaraka amin'ny ravina maitso sy Bourgogne,, ary rehefa tonga ny lohataona, ny trano hivadika ho volomparasy ala. Ity faritra ao Londres no misy hevitra ny mpamaham-bolongana any an-danitra!
4. Calleja de Las Flores, Cordoba, Espaina
Ny Calleja de Las Flores dia iray amin'ireo mpizaha tany malaza indrindra eny an-dalambe amin'ny tanàna Andalusia Cordoba, Espaina. Izany ihany koa nahoana no ao amin'ny lisitra ny ankamaroan'ny Beautiful Streets In Eoropa. Napetraka ho fihaonan-dalana ny eny an-dalana Velazquez Bosco, dia tery an-dalambe izay miafara ao amin'ny kianja.
Ny rindrina fotsy no nilahatra tamin'ny maro, rustic feno voninkazo vilaniny fandraofan-davenona sy ny carnations Geranium, manome be voninahitra Pop ny loko ho tena manokana ity ampahany amin'ny tanàna. Miaraka sy ny tery, cobbled rihana, vato archways ary mazava ho azy ny rindrina tsara tarehy Decor, ny Mezquita Cathedral ao amin'ny fomba fijery avy eo anelanelan'ny rindrina hampisy koa ny tonga lafatra any amin'ny iray efa tanteraka sary.
5. Beautiful Indrindra Street In Eoropa: Chalcot Square, London, England
Tucked lasa amin'ny efajoro kely akaikin'i Primrose Hill, dia ho hitanao ny iray amin'ireo tsara indrindra Streets In Eoropa ihany koa ny indrindra Instagrammable! Alao sary iray andalana tsara tarehy miloko tanora townhouses izay mitsangana ambony, curving manodidina ny kely, maitso valan-javaboary izay Chalcot Square. Izany dia vato manary avy Regents Park sy ny malaza Camden Market.
6. Rozenhoedkaai, efa nampiasaina, Belzika
Raha efa nahita ny sarimihetsika, Ao amin'ny Bruges amin'ny Colin Farrell. Dia ho fantatrareo tsara izay isika miresaka momba ny. Izany angamba no iray amin'ireo toerana idyllic indrindra ho an'izany fotoana carte postale! Rozenhoedkaai dia mety ho kely toy ny eny an-dalana noho ny toerana hafa ity lisitra, na izany aza, dia nataonay fa mbola mendrika ny miresaka manokana. Na inona na inona ny fotoana ny taona, Rozenhoedkaai glows noho ny mpitsidika. Misy ny hilaza zavatra toy izany momba ny Fairytale trano ary ny alon-drano hazo fa saika miara-manatsoboka ny rano any an-lakandrano.
7. Beautiful Indrindra Street In Eoropa: Victoria Street, Edinburgh, Scotland
Ankafizo hoe nandeha nidina Edinburgh cobbled Victoria Street feno fahafinaretana, tsy manam-paharoa toeram-pivarotana, ary eateries. Victoria Street dia mafy orina ny citys tapa-tantara sy ny vato tranainy rindrina sy ny hatsarany taona nahasarika mpitsidika manerana. Ataovy azo antoka ianao mandeha nidina ho any amin'ny Grassmarket izay Avy any amin'ny taonjato faha-14 sy nivarotra ny fananany ao an-toerana isan-karazany ny vokatra sy potika haka.
8. Nyhavn, Copenhagen, Danemark
Nyhavn kongona ilay efajoro noho ny maha-tonga lafatra sary lafiny seranan-tsambo eny an-dalana fa ranolava amin'ny loko, amin'ny idyllic sambo potika, mamy trano fisotroana kafe sy trano fisakafoanana classy milahatra andaniny sy ny ankilany. Ity tanàna ity mirehareha Copenhagens quirky rivo-piainana sy ny hipster Vibe ary koa ny tsara tarehy indrindra arabe tao an-tanàna. No trip to Copenhagen is complete without a stroll and a photo here though.
9. Beautiful Indrindra Street In Eoropa: Burano, Venice, Italia
A mandeha (na mitaingina sambo) midina eny an-dalana tsara tarehy ity tany Venise dia toy ny maka ny fitsidihana ny avana. Burano dia nosy iray tao anatin'ny Venetian Lagoon, fa raha tsara vintana ianareo efa sendra ampy mba hitsidika dia ho hangorona ny fakan-tsary (finday) avy hatrany. Ny trano sy ny lakandrano mandeha mahitsy tsara tarehy amin'ny alalan'ny izany ho azy dia ny hilaza. Izany no karazana toerana izay afaka manainga na iza na iza toe-po indray mipy.
10. East Side Gallery, Berlin, Alemaina
Makà hoe nandeha nidina izao tontolo izao malaza East Side Gallery. Ny eny an-dalana miaraka amin'ny tena kalamanjana Gallery voalalotra rehetra miaraka amin'ny sisa tavela ao amin'ny Berlin Wall. Misy ny fahafahana Insta galore arabe midina io ho toy ny zavakanto dia mampino, fa izany ihany koa bolo Berlin fampahatsiahivana tantara sy ny Ady Mangatsiaka.
Moa ve ianao vonona ny handeha hitsidika tsara tarehy indrindra Streets In Eoropa? Ataovy azo antoka ianao boky Save A Train Tsy misy sarany fanampiny, tsy Fuss, fahafinaretana fotsiny!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Streets tsara indrindra In Eoropa To Explore” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-streets-europe%2F – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
europestreets europetravel longtrainjourneys prettystreets trainjourney fiarandalamby fiaran-dalamby soso-kevitra
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Nandeha lamasinina Luxembourg, Fiaran-dalamby Switzerland, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe